30 व्यवसाय बृद्धिका लागि प्रार्थना अंकहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स 30 व्यवसाय बृद्धिको लागि प्रार्थना अंकहरू
30 व्यवसाय बृद्धिको लागि प्रार्थना अंकहरू
उत्पत्ति 26:12 तब इसहाकले त्यस भूमिमा खेती गरे अनि त्यस वर्ष एक सय गुणा बढी अन्न फलाए। 26 त्यो मानिस धेरै ठूलो हुँदै गयो र यो बढेर ठूलो हुँदै गयो। 13:26 ऊसित धेरै भेडा-बाख्रा, गाई-वस्तुहरू र धेरै सम्पत्तिहरू थिए। यसैले पलिश्तीहरूले ईर्ष्या गर्न थाले।
सफलता र वृद्धि भगवान आफ्ना सबै बच्चाहरु को लागी इच्छा छ। John यूहन्ना १: २ को पुस्तकमा, भगवानले यो स्पष्ट पार्नुभयो कि उहाँको सबैभन्दा ठूलो चाहना हामी प्रत्येक मोर्चामा सफल भएको देख्नु हो। सफल हुनु भनेको बढ्नु र विकासको अर्थ हो प्रगति। आज हामी व्यवसाय वृद्धिको लागि prayer० प्रार्थना बिन्दुहरूमा संलग्न हुनेछौं। यो प्रार्थना पोइन्टहरूले तपाईंलाई ईश्वरीय बुद्धिको साथ सशक्त तुल्याउनेछ जब तपाईं आफ्नो व्यापारको वृद्धि र दिगोत्वको लागि कार्य गर्नुहुन्छ। कुनै पनि व्यवसाय बढ्न सक्दछ, जब सम्म तपाईं यसलाई परमेश्वरको बुद्धिले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंको लागि आज मेरो प्रार्थना यही हो, आलस र आत्मसन्तुष्टिको हरेक भावना तपाईंको जीवनलाई पिरोल्दै येशूको नामबाट अब तपाईंबाट टाढा हुन्छ।
जब एक व्यापार बढ्दै छ, यसको सरल अर्थ भनेको व्यवसाय आकार, ग्राहक आधार, शाखा र पाठ्यक्रम नाफामा विस्तार भइरहेको छ। भगवानको बच्चाको रूपमा, परमेश्वर तपाईंलाई आफ्नो तट विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँ चाहनुहुन्छ कि तपाईं चारैतिरबाट फुटोस्। तपाई केवल एउटा पसल वा एक अफिसमा हुनु हुन्न, होइन, ईश्वर तपाईको व्यवसायलाई पृथ्वीको कुनामा पुग्न चाहान्छ। इसहाक एक किसानको रूपमा शुरू भयो, तर ऊ अन्य क्षेत्रहरूमा विस्तार भयो, जस्तै गाईवस्तु पाल्ने र राम्ररी उत्खनन गर्ने इत्यादि। अब्राहम पनि एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक मानिस थिए, अय्यूब आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो देशको सबैभन्दा धनी मानिस थिए। तपाईंलाई सानो सुरु गर्न अनुमति छ, तर तपाईंलाई सानो रहन अनुमति छैन। परमेश्वर तपाईं बढेको चाहनुहुन्छ, उहाँ तपाईंको विस्तार भएको चाहनुहुन्छ र तपाईंको संसारप्रति ईर्ष्या बन्न चाहनुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाईको व्यवसायमा बढ्नको लागि तपाईले विकास सोच्नु पर्छ, तपाईले देख्न नसक्ने प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको छ कि तपाईले आफ्‍नो आँखाले देख्न सक्ने ठाउँमा मात्र अधिकार गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सरल अर्थ यो हो कि जब सम्म तपाईंले आफ्नो दिमागमा वृद्धि देख्नुहुन्न, तपाईं यसलाई पहुँच गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले आफ्नो हृदयमा वृद्धि कल्पना गर्नुपर्दछ, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईंले यसलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नु अघि। यो प्रार्थना बिन्दुलाई व्यवसायको विकासको लागि तपाईंको दिमागलाई खोल्नेछ तपाईंको व्यवसायको अर्को चरणमा एक दर्शन पाउन। म येशूको नाममा तपाईंको व्यापार वृद्धि को साक्षीहरूको सुन्नेछु।
१. पिता, म तपाईको सबै भन्दा ठूलो चाहना को लागी धन्यवाद गर्दछु येशूको नाममा समग्र समृद्धि
२. बुबा, मेरो गल्तीले येशूका नाममा मेरो व्यवसाय नष्ट गर्न नदिनु भएकोमा धन्यवाद
Father. बुबा, म अनुग्रहको सिंहासनमा प्रवेश गर्दछु कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न को लागी बाँच्न र येशूको नाममा मेरो व्यवसाय द्वारा सही।
Father. बुबा, म येशूको नाममा मेरो व्यापारको बारेमा जान्छु म अलौकिक ज्ञानको लागि सोध्छु
Father. बुबा, मलाई रणनीतिको लागि ठूलो ज्ञान दिनुहोस् ताकि येशूको नाममा मेरो व्यवसायमा सफल हुन सक।
Father. बुबा, मलाई येशूको नाममा व्यवसायमा सफल हुन मद्दतको लागि मलाई सहि मानिसहरूसँग जोड्नुहोस्।
Father. बुबा, मलाई सही वातावरणमा लैजानुहोस् जहाँ येशूको नाममा मेरो व्यवसाय बढ्दै जान्छ।
Father. बुबा, मेरो नाम खोल्नुहोस्, येशूको नाममा मेरो व्यवसायमा रहेका सबै विचाराधिन मुद्दाहरूको समाधान हेर्न।
I। म घोषणा गर्दछु कि मेरो नाम इसहाकको नाम पछि येशूको नाममा फस्नेछ।
१०. म घोषणा गर्दछु कि मेरो व्यापारको बिरूद्ध कुनै पनि हतियार येशूको नाममा आमिन हुँदैन
११)। पिता, मेरो नाम येशूको वचनमा तपाईंको वचनमा राख्नुहोस्
१२)। बुबा, म आज घोषणा गर्दछु कि येशू मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मसँग फेरि कहिल्यै निर्देशनको अभाव हुनेछैन
१))। बुबा, मेरो पाइलालाई सहि व्यक्ति र सही समयमा अर्डर गर्नुहोस्
१))। बुबाले मेरो चरणहरू येशूको नाममा ठीक ठाउँमा पुग्नुभयो।
१))। बुबा, मेरो नाम येशूको नाममा सही मानिसहरुलाई दिनुहोस्
१))। बुबाले मेरो चरणहरूलाई सही नाम, क्यारियर र / वा व्यवसायको नाममा येशूको नाममा अर्डर गर्नुहोस्
१))। हे पिता, मलाई प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, तर येशूको नाममा भएको सबै खराबीबाट मलाई जोगाउनुहोस्
१))। बुबा, तपाईंको वचन आजदेखि येशूको नाममा मेरो पहिलो पुस्तक निर्देशन हो
१)) प्रिय पवित्र आत्मा, आजदेखि येशूको नाममा मेरो पहिलो नम्बरको सल्लाहकार बन्नुहोस्
२०)। धन्यबाद बुबाको नाममा तपाईंको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहोस्
२१)। बुबा, मलाई ठूलो बुद्धिको लागि मलाई धन्यवाद दिनुभएकोमा धन्यवाद
२२)। बुबा, तपाईंको बुद्धिले मलाई मेरो नाममा येशूको नाममा गतिविधिहरू गर्न सल्लाह दिनुहोस्
२))। बुबा, जब म येशूको नाममा जीवनको दौड दौडन्छु, तब मलाई बुद्धिको आत्माले उत्प्रेरित गर्नुहोस्
२))। येशूको नाममा मेरो दैनिक क्रियाकलापहरूमा बुद्धिको प्रदर्शन हुन दिनुहोस्
२))। बुबा, मलाई येशू नाममा दिनहुँ मानिसहरूसँग कसरी सम्वन्धित छु भन्ने ज्ञान दिनुहोस्
२))। बुबा, मलाई येशूको नाममा मेरो जीवनसाथीको सम्बन्धमा बुद्धिमत्ता दिनुहोस्
२))। बुबा, मेरो नाम येशूमा राखेर मलाई दिनुहोस्
२)) बुबाले मलाई येशूको नामको अफिसमा मेरो हाकिमसँग व्यवहार गर्न बुद्धि दिनुहुन्छ
२))। पिता, मलाई येशूको नाममा मेरा अधीनस्थहरूसँग व्यवहार गर्ने समझ दिनुहोस्
)०) बुबा, येशूको नाममा मलाई अलौकिक ज्ञान दिएर धन्यवाद छ।
अघिल्लो लेखमा२१ आमाबुबाको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
अर्को लेखमाIngs० प्रार्थना बिन्दुहरू प्रार्थना सभाहरूको लागि
विवाहमा व्यभिचार त्याग्ने To तरिकाहरू
Eternal० बाइबल पदहरू अनन्त जीवन kjv बारे
कठिन समयमा विश्वासको बारेमा शीर्ष १० बाइबली पदहरू